ဟူး…ရေး…Hoo-ah 20.06.2016 Our Daily Bread
ဖတ်ရန်: ဆာ ၆၈း၇-၁၀၊ ၁၉-၂၀ | သမ္မာကျမ်းစာတစ်နှစ်စာ: □ ဧ ၁-၂ □ တ ၅း၁-၂၁
ထာဝရဘုရားသည် အစဉ်မင်္ဂလာရှိတော်မူ စေသတည်း။ ငါတို့ကို သူတစ်ပါး ညှဉ်းဆဲသော အခါ ဘုရားသခင် ကယ်တင်တော်မူ၏။ (း၁၉)
အမေရိကန်စစ်တပ်၏ ‘ဟူး…ရေး…’ ဟူသော အာလုပ်သံသည် သဘောတူကြောင်း တုံ့ပြန်ဖြေကြားသည့်အသံဖြစ်သည်။
‘ဟူး…ရေး…’၏ မူလအဓိပ္ပာယ်မှာ သမိုင်း၌ ကွယ်ပျောက်သွားပြီဖြစ်သော်လည်း ၎င်းကို ကြားနာသည်၊ သဘောပေါက်သည်၊ အသိအမှတ်ပြုသည် ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသော စာလုံးအတိုကောက် ‘HUA’ မှ ဆင်းသက် လာသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ဤစကားလုံးကို အခြေခံ စစ်သင်တန်း၌ ကျွန်တော် ပထမဆုံး ကြားခဲ့ရသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်တိုင်း အမျိုးသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့် သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာချိန်၌ ဤစကားကို ကျွန်တော် တစ်ဖန်ပြန်တွေ့သည်။
တပ်မ ၈၂ လေထီးတပ်ခွဲမှ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးက ဆာလံကျမ်းကို ဖတ်ရှုရာ `Selah´ ဆိုသော စကားလုံးမှာ အခန်းကြီး တစ်ခုလုံးတွင် ပါဝင်နေသည်ကို သတိပြုမိသည်။ `Selah´ ဟုဖတ်မည့်အစား သူက ‘ဟူး…ရေး…’ ဟု အသံ ကျယ်ကျယ် ဖတ်လိုက်သည်။ ထိုမှစ၍ `Selah´ ဆိုသော စကားလုံးနေရာ၌ ‘ဟူး…ရေး…’ က ကျွန်တော်တို့သုံးနေကျစကားလုံး ဖြစ်လာတော့သည်။
`Selah´၏ အဓိပ္ပာယ်မှန်ကို မည်သူကမျှ အတိအကျမသိပါ။ အချို့က ၎င်းသည် ဂီတသင်္ကေတတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ကျမ်းပိုဒ်တွင် သမ္မာတရားကို ဖော်ပြ ပြီးနောက် အလေးအနက် စိတ်ပါဝင်စားစွာ တုံ့ပြန်ရန် ဖိတ်ခေါ်သည့်အနေဖြင့် `Selah´ဟု ဖော်ပြသည်။ ထိုသို့သော အဓိပ္ပာယ်မျိုးနှင့် ‘ဟူး…ရေး…’သည် ကျွန်ုပ်အတွက် အလုပ် ဖြစ်သည်။
ယနေ့နံနက်၌ ကျွန်ုပ် ဆာလံ ၆၈း၁၉ ကို ဖတ်သည်။ ‘‘ငါတို့၏၀န်ထုပ်များကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သယ်ဆောင်တော်မူသော ထာဝရဘုရားအား ထောမနာပြုကြလော့။ `Selah´။
မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ နံနက်တိုင်း ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သူ့ပုခုံးထက် တင်ကာ တစ်နေ့လုံးသယ်ဆောင်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၌ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စိုးရိမ်ပူပန် ကြောက်ရွံ့
နေစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ‘ဟူး…ရေး…’ ဟု ကျွန်ုပ် ဆိုပါသည်။
သခင်ဘုရား၊ အသေခံခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်နှင့် ရန်ငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကို ပေးခဲ့သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်၍ မဆုံးနိုင်ပြီ။ ကိုယ်တော်သည် ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်ပေးအပ်ထားသော အရာများထဲမှ အကောင်းဆုံးသောအရာကို ဘုရားရှင်အား ပြန်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
I realize what i surrendered in my life..
Eat pork too much
Kick.door at angry time
Shout to wife
Talk bad thing of own boss.
Surender one by one
for beloved family and church.
Our JESUS CHRIST surrendered
The Greatest God...We Worship.